သတင်း | Kachin Development Networking Group (KDNG)
ဖားကန့်ဒေသရှိ ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီ လုပ်ကွက်တစ်ခုအတွင်း လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေသူများ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီး ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေသူ ငါးဦးသေဆုံးကာ ၂၀ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ငါးဦး ဆေးကုသမှု ခံယူနေရ
ဖားကန့်ဒေသရှိ ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီ လုပ်ကွက်တစ်ခုအတွင်း လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေသူများ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီး ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေသူ ငါးဦးသေဆုံးကာ ၂၀ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ငါးဦး ဆေးကုသမှု ခံယူနေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဖားကန့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေနံသဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ နဲ့ ကျောက်မျက် ဓာတ်သတ္တု စတဲ့ တွင်းထွက် သယံဇာတပေါင်းစုံ ကို ထုတ်ယူနေပေမယ့် သဘာဝ သယံဇာတက ရရှိတဲ့ ဝင်ငွေရဲ့ တဝက်ကျော် သာ ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍဍာငွေထဲ...
ဖားကန့် ကုဋေနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲ တပ်မတော်သားတွေဝင်လာပြီး အမျိုးသား ၄ ဦးကို အပြစ်မဲ့ ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ . လီဒိုလမ်း၊ ဖားကန့်လမ်းဘက်ကို တပ်မတော်က စစ်အင်အား တစ်ဖန်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းလာတဲ့အတွက် တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောဆိုပါတယ်။ . #တိုင်းရင်းသားဘာသာ (TV) သတင်းအစီအစဉ် ကချင်ဘာသာ...
By နနျးလှငျနှငျးပှငျ့ 15 October 2017 Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း ပညာရှင် တရုတ်လူမျိုး လီဒါရှန်က သူ မြစ်ကြီးနားဈေးက ဝယ်လာတဲ့ ပယင်း ထဲမှာ...
By နန်းလွင်နှင်းပွင့် 14 October 2017 ကချင်ပြည်နယ် တနိုင်းဒေသက တူးဖော်ရရှိတဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၉၉ သန်း သက်တမ်းရှိ ဒိုင်နိုဆောအမြီး အပိုင်းအစလေး နစ်မြုပ်နေတဲ့ ပယင်းကျောက်အကြောင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းက ကမ္ဘာတဝန်းလုံး သတင်းပျံ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ တနိုင်း က...
By နန်းလွင်နှင်းပွင့် 25 September 2017 ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ခါကာဘိုရာဇီ အမျိုးသား ဥယျာဉ် တောင်ပိုင်း ထပ်မံ တိုးချဲ့မည့် အစိုးရ၏ အစီအစဉ်ကို သဘော မတူသဖြင့် ဒေသခံများက ကန့်ကွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြမည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုခရိုင်...
By ထက်မြက် 21 September 2017 မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းစစ်သက်တမ်းသည် ကမ္ဘာတွင် အရှည်ကြာဆုံးဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိ ငြိမ်းချမ်းရေးရရန် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကရော၊ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ကပါ ကြိုးပမ်း အားထုတ်နေသော အချိန်ဖြစ်ပါ သည်။ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အတူ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာရာတွင် ၁၉၄၈ မတိုင်ခင်ကတည်းက...
20 September 2017KBC အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူး ၊ သိက်ခာတျောရ ဆရာတျောကွီး ဒေါကျတာခလမျဆမျဆှနျ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ပထမပတ်က ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ကိုယ်စားလှယ်များကို တရုတ်အစိုးရရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့သို့...
14 September 2017ပူတာအိုဒသေကို ကမ်ဘာ့အမှအေနှဈ နရောတခု အဖွဈ သတျမှတျရနျ ယူနကျစကိုက အဆိုပွုထား / http://www.wanderlusttravelmyanmar.com မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း၏ မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေခဲ့သော မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးပေါ်တွင် “Full of Life, Full...
By Seamus Martov4September 2017 မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဖျားပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဧရာဝတီ မြစ်အထက်ပိုင်းတွင် တည်ဆောက်မည့် ဆည် ၄ ခုကြောင့် ဝေးကွာလှသော အောက်ပိုင်း မြစ်ဝှမ်းဒေသများအထိ ဂေဟစနစ်သည် ပြန်လည် ပြုပြင် မရနိုင်လောက်အောင်...